bandy iray, sipa iray, tantara iray, … – Malag@sy Miray
bandy iray, sipa iray, tantara iray, …
Malomaloka mahangômangôma ny andro, ilay mahakamokamo tsy maha-te hiasa iny. Vao avy bedin’ny mpampiasa ireto mpiasa roalahy fa tsy mahafa-po loatra hono ny fandehan’ny asany ary norahonany fa tsy hahazo fisondrotan-karama amin’irý taona vaovao irý raha tsy mahatratra ny vokatra enjehina. Efa fomban’ny mpampiasa ihany itý toetra itý ikarohana fomba handavana ny fisondrotan-karama ho an’ireto mpiasany izay efa fanao isaky ny taona vaovao.
Gagagaga kosa i Setra raha mahita an’itý namany, i Guss, toa tsy rototra firy, ary sady mbola velon-tsioka no tsy mifofotra amin’ny asa fa mihodinkodina fotsiny. Amin’ny fotoana hafa anefa rehefa avy omen’ny mpampiasa bedibedy itý ranamana itý dia tsy ahitan-teny fa mitsoitsoy toy ny vorona nolemana.
Fa mahafaly an’ialahy angaha ny tsy hahazo fisondrotan-karama leisy RaGuss?
Tsy izany leisy fa mahatsiarotsiaro ny omaly hariva aho an! Omaly ilay avy nanao basket iny dia tafaraka tamina sipa manjakely izay tao anaty fiara fitateram-bahoaka. Manja leisy izany an! Tsy mety afaka ato an-tsaiko mihitsy ilay salovan-tavany.
Koa ialahy leisy na manja na rakony no tafaraka amin’ialahy, ialahy aza saro-kenatra tsy mahasahy mampiresaka io akory…
Diso ialahy tamin’itý indray mitoraka itý! Tsy nilaina nampiresahina akory ilay sipa dia niresaka. Izany leisy sady tsara no sariaka. Avelao kely aloha io asa mafy io fa hotantaraiko amin’ialahy ny tantara.
Teo amin’ilay seza antsoin’ny mpamily mpanampy hoe seza faharoa iny izahay roa no nipetraka: Izy no niditra taloha dia naka toerana tandrifin’ny varavarankely, izaho kosa teo anilany. Misy mahatsara azy leisy itý Mazda atao efatra efatra isan-daharana itý fa mba ahafahana mifampitositosy. Vao niditra aho dia nitsikiany kely, tsiky malefaka sy fijery ankamantatra. Inoako fa tia ny bandy mpanao fanatanjahan-tena izy satria mbola tsembotsemboka avy nanao basket aho no niditra tao anatin’ilay fiara. Noarahabaiko hoe « Manao ahoana indry » dia namaly tsotra koa hoe « Manao ahoana ». Eo amin’ny fomba famalin’ny sipa ny arahaba ihany dia ampy tanteraka hahafantarana izay miafina ao an-tsainy: Misy ny milongilongy mila tsy hamaly, misy ny mody matotra be, fa ny azy … aoka fotsiny.
Vao nipetraka kelikely izy dia nanao azafady fa hoe misy adinony hono ka voatery hiala. Tsy mbola tonga dia afaka nanome làlana azy moa aho fa be entana be koa ilay ramatoa teo akaikiko nibahana ny làlana. Kanjo niova hevitra koa izy fa tsy hivoaka indray, asa na Anjely no nanoro hevitra azy na Andriamanitra no namaly ny vavabavaka nataoko.
Dia roso ary ny dia. Hitako mangala-pijery atý amiko foana izy, toa miteny hoe mba ampiresaho aho ry Bôgôsy an! Tamin’ny voalohany aloha mbola saro-kenatra be aho dia tsy sahy niteny mihitsy. Maka fofona aloha fa sao diso fandika ny fihetsiny aho. Mety hahagaga ihany mantsy hoe sipa toy izany ny hamanjany nefa taratara amiko. Asa na kivikivy izy noho izaho tsy niraika nampiresaka fa nanova tetikady indray izy: Narosony kely ny lohany nanatona ny varavarankely ary dia notsofin’ny rivotra niditra teo ny volony malantolanto, niakatra toa maninji-tànana hanafosafo ny tarehiko. Tsy nisy fisalasalana intsony aho nanomboka teo fa tena misy hevitra mifonofono ny fihetsik’itý zazavavy itý. Nikaroka izay hanombohako ny fampiresahana amin’izay aho, saingy toa azon’ody tsy nahahetsika tampoka teo: Ny lohaliko tonga dia nalemy, soa ihany aho fa nipetraka; ary ny lelako toa niraikitra tsy nahateny na singam-bolana anankiray aza.
Nanampy tosika ahy kely indray aloha teo Andriamanitra. Sendra nijanona mantsy ny fiara ary nisy vehivavy malotoloto mpamafa làlana teo am-pitan’ny arabe nimenomenona sy nanao fihetsika mampihomehy. Dia hoy ilay mpamily mpanampy mba ho ren’ny mpandeha rehetra: « Io vehivavy io hono tsy mahavita mamafa làlana fa tsy voaloa ny karamany ». « Sssss, adinareo any an-trano any aza entina ety imasom-bahoaka », hoy ilay sipa teo akaikiko nanaraby azy. Ny fantatro anefa, tsy ny hanaraby an’ilay mpamily mpanampy akory no mahafinaritra azy fa ny hampiseho amiko fa te-hiresaka mafy izy. « Ary indry mahay vava an? », hoy aho taminy. Mafy ihany rehefa tsy zatra mampiresaka olona fa dia izay no mba fehezanteny voaloakan’ny vavako. Tsy nahatezitra azy anefa izany fa tsiky kely fotsiny no nasetriny ahy.
Nahazo bahana kely aho dia mba sahy nanohy nanontany: « Avy nianatra angaha indry dia handeha hody? ». Nijery kely ahy izy dia namoaka hoe « Ie ». « Fa aiza indry no miala? », hoy aho sao mba tàhiny eo amin’ny fialako koa izy no hiala. Nampiako hoe « Izaho mantsy ao amin’ny fijanonana faharoa manaraka ny eto no miala ». Namaly izy hoe « Mbola ao aoriananao aho izany no miala ».
Teo dia nitaky saran-dàlana ny mpamily mpanampy. Indrisy fa toa sosoa voatapo-drano koa ilay resaka efa saiky nanomboka teo. Izaho koa tsy nampiditra teny na inona na inona mihitsy nandritra iny fanangonana saran-dàlana iny fa nankafy ny fifampikasohana teo aminay roa fotsiny. Nisahirana mihitsy mantsy izy naka ny saran-dàlan’ireo mpandeha tao aorianay sy nanolotra izany tany aloha. Ny tànany malandilandy amin’izany mikasikasika ny lohako foana, mody tsy manan-tsiny kanefa manararaotra manafosafo ahy. Avy eo indray, somary sokafany kely ny tratran’akanjony, asa tiany ho hitako koa angamba ny nonony, izay inoako sahady fa kanto sy mahate-ho tia.
Dia tapitra leisy ny tantara ry Setra fa tonga ny fialako an! « Veloma indry », hoy aho dia novaliany koa hoe « Veloma ». Hita taratra tamin’ny fomba famaliny an’ilay veloma anefa fa tena nahatsapa fahafinaretana toa ahy koa izy tao anatin’izay fotoana kely nifandraisana izay. Toa tena nandrenesana sento kely mihitsy aza ilay Velomany, toa manambara hoe « Tapitra sahady ny tantara ». Inoako anefa fa tsy ny tantara no tapitra fa vao ny fizarana voalohany fotsiny. Rahariva ihany aho dia hody aloha toy ny omaly, andrasako amin’ilay fotoana nodiany iny mihitsy izy sao mbola tafaraka indray izahay, ary minoa ahy fa tsy maintsy mbola hihaona izahay ato ho ato.
Malomaloka mahangômangôma ny andro, ilay mahakamokamo tsy maha-te hiasa iny. Ao anaty birao iray ao amin’ny orinasa lehibe iray eto an-dRenivohitra, misy vehivavy iray mbola erotrerony mamaky gazety, injao misy mandóndóna ny varavarana ary lehilahy iray no miditra miaraka amin’ny tsikitsiky sy endrika sariaka vao maraina.
Bonjour Chérie, mametrapetraka indry omaly hariva an!
Mike, tsy mbola misy bise akory ve leisy dia izany sahady ny an’ialahy. Tsy izany leisy malala fa efa tao anaty fiara fitateram-bahoaka aho vao nahatsiaro hoe nasain’ialahy nandalo omaly. Raha tao aho vao niverina ho atý amin’ialahy mety ho efa tsy nahatratra an’ialahy akory. Mba ividiano finday vaovao aho leisy ho solon’ilay very iny, any chéri an? Mba hiantsoako an’ialahy rehefa ohatra an’ireny.
Ka indry ange na tsy niantso aza nandrasako foana e! Izay tia mahandry e! Izaho anie omaly tamin’ny fito vao niala tao niandry vasoka an-dry e!
Andray! Nanenina tanteraka aho izany tsy niverina. Efa nieritreritra ny hiverina ihany anie aho e! Nisy lehilahy ravoretra izay teo akaikiko tao anaty fiara dia nisy vehivavy matavy be koa iray laharan-tseza taminay. Efa nanao azafady aho hoe hivoaka fa ela fikenona be ilay ramatoa matavy dia niova hevitra indray aho. …Fa tantara ratsy izay omaly izay an, loza koa ilay tsy misy vola mihitsy atý amiko, tsy ampy nandehanana fiara karetsaka akory ny tatý anaty poketrako.
Rafilahiko indray izao izay! Tantarao aloha hohenoina e!
Asa na avy nihazakazaka avy aiza ilay lehilahy izay fa hatsembohana maharikoriko tsy misy ohatra an’izany, tsy mifafa akory. Mahate-hampindrana mosoara mihitsy ny mijery azy. Efa nanaovako endrika kivikivy izy sao mba mahatsapa tena hoe tsy tiako ny ipetrahany eo akaikiko, inona fa tsy vao mainka mitankisina?
Hitan’ialahy? Mitovitovy amin’i Lendondo ny tarehiny sy ny feony (sady mihomehy ilay zazavavy no manonona ny anaran’i Lendondo). Niarahaba ahy izy, noheveriko fa i Lendondo dia nojereko tsara aloha dia namaly tsy sazoka aho sao olona mahafantatra ahy. Nojereko tsara ihany aloha ny endriny sao olona fantatra ka manjary lazainy hoe miavonavona aho, fa nony azoko antoka fa olona tsy mifankahalala amiko dia nanaovako toeran-tsy zaka amin’izay. Saingy toa tsy nisy nandaitra mihitsy e.
Vao nandeha kelikely ny fiara dia nidofaka ny fofon-kelika. Dray dray dray… Kely sisa no tsy nilazako taminy hoe mampiasà alamo. Soa ihany fa tandrifin’ny varavarankely no nipetrahako dia natodiko tany ivelany ny oroko sy vavako hifoka rivotra madio fa raha tsy izany angamba sempotra tao aho. Ataoko hitany mihitsy amin’io ny tsy fahazakako azy an! Noho ny hasosorako taminy dia ilay mpamily mpanampy manao be lazao tatý indray no nomeko ny paké-ny. Izy ihany anefa avy eo no miana-kendry mibedy ahy hoe « Ianao mahay vava an? ». Hoy aho tany an-tsaiko tany hoe « Raha mahay vava aho efa nasaiko nikisaka ianao sy ny fofon-kelikao », saingy mbola tsara fanahy loatra aho ka dia fijery masiaka fotsiny no nasetriko azy, fijery mananatra hoe « Ny anao aloha akombony Ramose ».
Fa tena dondrona koa izany raha bandy an! Hoatr’izao ve ny bika sy fitafiko omaly dia heveriny hoe zaza mbola mianatra aho fa tsy efa miasa.
Fa nony tonga ny fotoana fanangonana ny saran-dàlana no tena nataoko tamin’ny fanaovana azy tamin’izay fa leo aho. Mody nanoso-tena ho terem-panahy hanangona ny saran-dàlan’ireo olona mipetraka tao aoriana aho, nefa ny tena tanjoko dia ny hanome dian-kiho ny lohany. Tsy nananako antra mihitsy fa naharikoriko. Soa ihany fa tsy sahy namaly mihitsy fa raha mbola niseho be taraina teo koa dia nanaovako ampamoaka teo amin’itý havoretrany. Saingy mbola tsy ampy ihany ny fihetsiko hahatsapany fa manery loatra izy sy ilay madama matavy be teo akaikiny, dia odiako tso-tsofina eto amin’ny tratrako hoe mafana kanefa ny tànako manokatsokatra ilay akanjoko iny manome dian-kiho atý amin’ny takibany atý.
Nivaly ihany ny vavaka nataoko fa niala tao amin’ny fialàna manaraka izy. Izay aho vao nisento kely fa afaka tamin’ny fiaretana ny fisiany. Soa ihany fa tantara indraimiseho iny fa tsy hiverina intsony. Manomboka androany aho, sanatria raha handeha amin’ireny fiara fitateram-bahoaka ireny intsony. Tsy maintsy hasiako vola ampy hatao saran-dàlana amin’ny fiara karetsaka atý anaty poketrako atý.
Par Dotmg 24 Commentaires
8 février 2007 à 10:02
tena milay !
tantara marina an ?
Tena » Ny lehilahy avy any Mars ary ny vehivavy avy any Vénus » 😀
Misaotra fa tena mahafa-po 🙂 Manan-talenta ny mpanoratra 😀 sady bôgôsy no be détente moa ?
8 février 2007 à 21:22
izany sy izany no zava misy raha mandeha 119 indrindra rehefa amin ny dimy hariva iny na avy orana. lol
une trè belle histoire qui d une certaine façon a été vécue même une fois par chacun de nous. les hommes et les femmes sont sacrément différents mais surtout nous rappelle que l art de la communication reste un domaine complexe.
9 février 2007 à 19:47
Dia miandry an’izay nitranga ny ampitso ary e!
10 février 2007 à 2:25
Niezaka mafy aho namaky…Mahalina tokoa ny tantaranao…Miandry ny tohiny e!
10 février 2007 à 9:31
Fa maninona anareo indray ny 119nay? raha fiara fitanteram-bahoaka angamba tsy misy ifandrombahana sahala amin’io raha eto Antananarivo koa. Fa na izany na tsy izany ny vehivavy tena mahay mampiseho ny fihetseham-pony an!
10 février 2007 à 21:54
hahaha, merci DotMG fa tena mahafinaritra sady mampihomehy ilay tantara! Ny hevitr’ilay bandy sy ilay sipa moa izany dia tena mifanipaka mihitsy! Ileiry miheritreritra mafy hoe tena tara aminy ilay sipa kay ilay sipa tena sorena sy kiriko aminy ery! lool comme quoi, tena sarotra @ olombelona ny tena hoe « francs » izany rehefa tojo situation iray! 119 na 128 no taxi-be raisinay rehefa handeha hianatra eny Ankatso taloha dia mitovy @ io voatantara io mihitsy ny ambiance ao anatiny matetika! hihihi j’attends impatiemment la suite (tokony mba hoe ndray hoe ilay sipa no ouain @ tapany faharoa lool)
11 février 2007 à 18:51
Mampatsiahy tantara iray efa novakiako ilay izy, tsy tadidiko na taiza, fa tsy tao anatina taxibe no nitrangany fa tao anatina car Boeing avy any Toamasina nakany Tana.
Hahitan-javatra tokoa izany ny fiarabe fitanterana ko!
12 février 2007 à 6:08
Misaotra daholo @ fankasitrahana!
Tohiny ahoana? Sous licence creative commons io dia tohizo araka izay itiavanareo azy ka!
Ary ça sent le vécu ahoana koa? Tsy mbô zà! 😀
16 février 2007 à 9:03
dotmg > tsy mbo zah an ?
toujours en parlant de transports en commun…
20 octobre 2008 à 8:21
manja be o
asio tohiny akia
30 juin 2009 à 8:39
mampihomehy, sady mampalahelo
3 juillet 2012 à 13:55
mlay ka tene manatalenta n gas kah
16 juillet 2012 à 10:26
Misaotra Lucia, ary efa 5 taona mahery sahady itony tantara itony 🙂
14 décembre 2012 à 5:04
Mahafinaritra eh! Tsy manampaharetana hieno ny tohiny . Deraina manokana ny mpanoratar @ sanganasany ;
mankasitraka e! mlay rangah!! @manarak ndray e
17 novembre 2014 à 13:29
Tena vao androany 17/11/2014 zaho no nahita sy namaky ity tantara ity ary tena nahafinaritahy mihintsy rehefa somary reraky stress (a 16h)
Misaotra ny mpandefa azy, dia mankasitra o.
2 décembre 2014 à 9:21
21 juin 2016 à 9:21
9 taona lasa izay ty post ty.
Iza taminareo koa no tonga teto avy t@ recherche google hoe « tantara vetaveta » ? 😀
17 avril 2017 à 20:42
10 taona Tay aoriana
21 mai 2017 à 11:55
Mlay b.Msotr anle auteur
30 avril 2019 à 9:15
Tsis tantara afa- ty io tsoun ve?
11 juillet 2019 à 13:10
12 taona aty aorina mbola io ihany le tantara izy , mbola tamin’izany aho no namaky azy de zao indray, tsara kahhhh.
3 novembre 2020 à 10:12
Tsara BE ,
Version 4 de MM: étape 1/4
20 Juillet 1868 - 20 Juillet 2018 : Madagascar pour le Christ